भिसा सर्कल: थ्रीडी टेक्नोलोजीको साथ तपाईंको ईकॉमर्स उत्पादन पृष्ठहरू उन्नत गर्नुहोस् Martech Zone
भिसा सर्कल: थ्रीडी टेक्नोलोजीको साथ तपाईंको ईकमर्स उत्पादन पृष्ठहरू अग्रिम गर्नुहोस्
मंगलवार, जुलाई 10, 2018 Douglas Karr
प्रविधि आविष्कारहरू हाम्रो समाज र धेरै क्षेत्रहरू र उद्योगहरूलाई धेरै हिसाबले वरदान साबित भएको छ। एक ईकामर्स इनोभेसन3डी टेक्नोलोजी को प्रयोग हो। वेबको सीमितता (यस बिन्दुमा) पूर्ण रूपमा उत्पादनको अनुभव लिन सक्ने क्षमता हो जुन हामी खुद्रा आउटलेटमा व्यक्तिगत रूपमा गर्छौं।
जबसम्म एआर र वीआर व्यापक रूपले अपनाईन्छन्, सबैभन्दा प्रभावकारी र आकर्षक अनुभव भनेको कुनै उत्पादन अनलाइन निरीक्षण गर्ने क्षमता हो जहाँ तपाईं घुमाउन र उत्पादको जूम गर्न सक्नुहुनेछ यसका सबै पक्षहरू हेर्न। जब म भर्खरै हाम्रो स्टुडियोको लागि साउन्डबार खरीद गर्दै थिएँ, म इनपुटमा घुमाउन र जुम गर्न सक्षम थिएँ जुन यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि यो हामीसँग भएका अन्य उपकरणहरूसँग उपयुक्त थियो। यो उत्पादन जानकारी पाना मार्फत झार भन्दा धेरै सजिलो थियो!
थ्रीडी कन्फिगरेटर के हो?
थ्रीडी कन्फिगरेटर एक अनुप्रयोग हो जसले तपाईका ग्राहकहरूलाई हरेक कोणबाट तपाइँका उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्न मद्दत गर्दछ। यो तपाइँको ग्राहकहरु लाई तुरुन्त र अन्तर्क्रियात्मक तपाइँको उत्पादन लाई अनुकूलित गर्न को लागी सक्षम हुनेछ। एक वास्तविक समय थ्रीडी कन्फिगुरेटर एक उपकरण हो जुन तपाईंको वेबसाइटमा रूपान्तरण दर बढाउन सक्दछ। यस थ्रीडी बिक्री प्रविधिको ग्राहकहरुलाई वास्तविक समय मा उत्पादनहरु लाई निरीक्षण र अनुकूलन गर्न अनुमति दिन्छ। थ्रीडी अन्तर्क्रिया दुबै ग्राहकको अन्तर्क्रियामा सुधार गर्न सकिन्छ - र अन्तत: सन्तुष्टि। निरीक्षणको गहनता बढाउँदै, तपाईं समग्र फिर्ती र ग्राहक मन्त्र कम गर्न सक्नुहुन्छ।
भिसा सर्कल - थ्रीडी कन्फिगुरेटर कम्पनी
भिसा सर्कल एक वास्तविक समय 3D कन्फिगुरेटर प्रदायक हो। चाहे तपाइँ विवाहको औठी, एउटा पलंग, एउटा कार, भाँडा वा पेन बेच्दै हुनुहुन्छ, तिनीहरूले यसलाई अधिक अन्तर्क्रियात्मक र आकर्षक बनाउन सक्दछन्। तिनीहरूको प्लेटफर्मले मार्केटरहरूलाई अधिक रूपहरू, सामग्रीहरू, र उत्पादनहरूका सुविधाहरूको समग्र रूपान्तरण वृद्धि गर्न सक्षम गर्दछ।
यो थ्रीडी कन्फिगरेटर भिस्कोलले प्रदान गरेको सबै सामान्य प्रणालीहरूमा विन्डोज, म्याक ओएस, एन्ड्रोइड, आईओएस र गुगल क्रोम वा फायरफक्स जस्ता ब्राउजरहरूमा चलाउँछ। यहाँ एक महान उदाहरण छ:
BizChat: टीम संचार र सहयोग
FindThatLead Prospector: खोजी र लक्षित लीड ईमेल ठेगानाहरू फेला पार्नुहोस्